बाइबलका कथाहरू: दुइटी साहसी आइमाई - यहोवाका साक्षीहरूको आधिकारिक वेब साइट
इस्राएलीहरू दुःख परेपछि यहोवालाई पुकार्थे। अनि यहोवाले उनीहरूलाई मदत गर्न साहसी नाइकेहरू पठाउनुहुन्थ्यो। यस्ता नाइकेहरूलाई बाइबलमा न्यायकर्ता भनिन्छ। सबैभन्दा पहिलो न्यायकर्ता यहोशू थियो। ऊ पछिका केही न्यायकर्ताहरूको नाउँ ओत्निएल, एहूद र शमगर थियो। तर इस्राएलीहरूलाई मदत गर्ने दुई जना आइमाईहरू पनि थिए। उनीहरूको नाउँ दबोरा र याएल थियो।
दबोरा अगमवादिनी थिई। यहोवाले उसलाई भविष्यमा हुने कुराहरू बताउनुहुन्थ्यो। त्यसपछि उसले अरूलाई यहोवाले भन्नुभएका कुरा बताउने गर्थी। दबोरा न्यायकर्ता पनि थिई। ऊ पहाडमा खजुरको रूखमुनि बस्थी। इस्राएलीहरू आ-आफ्ना समस्याहरू लिएर ऊकहाँ मदत माग्न आउँथे।
त्यतिबेला याबीन भन्ने मान्छे कनानको राजा थियो। ऊसित लडा गर्न ९०० वटा रथ थिए। उसको सिपाही धेरै अनि बलियो भएकोले थुप्रै इस्राएलीहरू जबरजस्ती याबीनका दास बन्न बाध्य थिए। राजा याबीनको प्रधान सेनापतिको नाउँ सीसरा थियो।
एकदिन दबोराले न्यायकर्ता बाराकलाई बोलाएर यसो भन्छे: ‘यहोवाले तिमीलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभएको छ: “आफूसित १०,००० मान्छेहरू लिएर ताबोर डाँडामा जा। त्यहाँ म सीसरालाई तेरो हातमा सुम्पिदिनेछु। म तँलाईं त्यो र त्यसको सेनामाथि विजयी गराउनेछु।” ’
तर बाराक दबोरालाई यसो भन्छ: ‘तपाईं मसित जानुभयो भने म जानेछु।’ दबोरा बाराकसित जान्छे। उसले बाराकलाई यसो पनि भन्छे: ‘तिमीले यो वीरताको कामबाट केही गौरव पाउने छैनौ। किनभने यहोवाले सीसरालाई एउटी आइमाईको हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ।’ वास्तवमा त्यस्तै हुन्छ।
ताबोर डाँडाबाट ओर्लेर बाराक सीसराका सिपाहीहरूसित लड्न जान्छ। अचानक यहोवाले बाढी ल्याउनुहुन्छ र सीसराका थुप्रै सिपाहीहरू पानीमा डुबेर मर्छन्। तर सीसराचाहिं आफ्नो रथबाट ओर्लेर भाग्न थाल्छ।
केही समयपछि सीसरा याएलको पालनेर पुग्छ। याएलले उसलाई भित्र बोलाउँछे र दूध पिउन दिन्छे। दूध पिएपछि सीसरालाई झपक्क निद्रा लाग्छ र ऊ एकैछिनमा मस्त निदाउन थाल्छ। त्यसपछि याएलले पाल टाँग्ने कीला लिएर त्यो खराब मान्छेको टाउकोमा रोपिदिन्छे। पछि बाराक आउँदा याएलले मरिसकेको सीसरालाई देखाउँछे! हो, दबोराले भनेको कुरा साँचो भयो।
अन्तमा याबीन पनि मारिन्छ र केही समयका लागि इस्राएलीहरू शान्तिसित बस्न पाउँछन्।
न्यायकर्त्ता २:१४-२२; ४:१-२४; ५:१-३१.
न्यायकर्त्ता कसलाई भनिन्छ? उनीहरूमध्ये केहीको नाउँ बताऊ।
दबोराले के विशेष मौका पाउँछे र उसले के गर्नुपथ्य?
राजा याबीन र उसको सेनापति सीसराले इस्राएललाई आक्रमण गर्न आउँदा दबोरा यहोवाले दिनुभएको के आज्ञा न्यायकर्त्ता बाराकलाई सुनाउँछे? तर कसले विजयको गौरव पाउँछ भनेर उसले भन्छे?
याएलले कसरी साहस देखाउँछे?
राजा याबीन मारिएपछि के हुन्छ?
न्यायकर्त्ता २:१४-२२ पढ्नुहोस्।
इस्राएलीहरूले कसरी यहोवालाई रीस उठाउँछन् र यसबाट हामी कस्तो पाठ सिक्छौं? (न्याय. २:२०; हितो. ३:१, २; इज. १८:२१-२३)
न्यायकर्त्ता ४:१-२४ पढ्नुहोस्।
दबोरा र याएलजस्ता साहसी आइमाईहरूबाट आज मसीही आइमाईहरूले विश्वास र साहससम्बन्धी कस्तो पाठ सिक्न सक्छन्? (न्याय. ४:४, ८, ९, १४, २१, २२; हितो. ३१:३०; १ कोरि. १६:१३)
न्यायकर्त्ता ५:१-३१ पढ्नुहोस्।
बाराक र दबोराले गाएको विजय-गीतलाई आउँदै गरेको आरमागेडोनको युद्धको बेला कसरी प्रार्थनाको रूपमा लिन सकिन्छ? (न्याय. ५:३, ३१; १ इति. १६:८-१०; प्रका. ७:९, १०; १६:१६; १९:१९-२१)